War jiraaba Cakaaruu iman. | Saxil News Network
Maah maahdan oo aan la aqoon qofkii curiyay, waxaa la’adeegsadaa marka lagu murmo warar iyo dhacdooyin aan la hubin run ahaanshahooda ama kuwo aan weli dhicin ee lafilayo in mustaqbalka ay dhacaan oo lagasii doodo qaabka ay u dhici karaan. Maah maahdani,waxa ay ku baxday,geedkan uu ka boodayo Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka madaxtooyada Somaliland.
Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka madaxtooyada Somaliland oo ka boodaya geedka ay ku baxday maah maahda Warjiraaba cakaaruu iman.
Geedkani sida la ii sheegay, waa geedka keliya ee hoostiisa la hadhsan karo ee ku dhex yaalla banka aadka u dheer ee loo yaqaan Xaadeed oo bari ka xiga Magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Dadka ku dhaqan aaggaas oo dhan, ayaa isugu iman jiray xilliga Duhurka oo hadh usoo raadsanjiray isla markaana isku waydaarsan jiray war iyo wacaal waxa uu midkastaa hayo. Wararka soo dhaca ka hor inta aan geedka latagin ee qof ama cid gaar ahi maqasho, si loo xaqiijiyo jiritaankooda, ayay soo baxday “ War jiraaba cakaaruu iman” .
Maanta iyo marar badan oo kale, ayaan la kulmay dad ku murmaya guddoomiye nimada xisbiga Kulmiye, Muuse Biixi waxa uu ku wareejinayaa kuxigeenkiisa Maxamed Kaahin Axmed iyo maya e waxaa uu ku wareejinayaa Maxamuud Xaashi Cabdi oo adeegsanaya maal badan iyo awoodda madaxtooyada halka dadka qaarna ay qabaan in labadooda midnaba aan lagu wareejinayn ee guddoomiye nimada laga iibiyay Pro Axmed Ismaaciil Samatar .
Arrintani, waa mid mustaqbalka lafilayo. Waxay u dhici kartaa saddexda weji mid uun ama si ka duwan intaaba. Sidaa darteed , ayaan usoo qaatay maah maahdan iyo sawirka wasiirka oo aan qaaday 21kii bishii July, 2016, wakhtigaas oo wafti uu hoggaaminayo wasiir Maxamuud Xaashi ay kasoo dhaqaaqeen degmada Awr-boogays oo lagu soo gunaanaday shir nabadayn ah oo laba maalmood uga socday xukuumadda Somaliland iyo beelaha dega gobolada Sool, Sanaag , Xaysimo iyo deegaanno tiro badan oo hoos yimaadda